युगसम्बाद साप्ताहिक - कहिले छोड्ने बाटो बूढाहरुले ?
Thursday, 05.28.2020, 04:05am (GMT+5.5) Home Contact
कहिले छोड्ने बाटो बूढाहरुले ?
Tuesday, 12.26.2017, 11:30am (GMT+5.5)
निर्वाचन सम्पन्न भयो ? धेरै शीर्ष भनिनेहरुले चुनाव हारे । केही आशलाग्दा युवाहरुले चुनाव जिते । जित्नैपर्नेहरुमध्ये धेरैले हारे । अहिले बाम गबठन्धनको बहुमत छ र प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने स्पष्ट छ । तर, देशले एउटा आश गरिरहेको छ, सक्षम नेतृत्व आएर राजनीतिक स्थिरता कायम होस् र मुलुक समृद्ध बनोस् । अहिले प्रधानमन्त्री–मन्त्री बन्नेहरु यसअघि पनि सत्तामा पुगेकै थिए । कोहीले आशा जगाए, कोहीले अरु बढी निराश बनाए । यद्यपि नेपाली जनताको आश कायमै छ, विकल्प छैन जनतासंग ।
विकल्प हुन्थ्यो भने अहिलेका धेरै नेता पछारिन्छे । तर पछारिएनन् । जनताले अझै नेताबाट आश गरेका छन्, उनीहरुबाट त्यागको प्रतिक्षा गरेका छन् । जनताको चाहना कोही पनि नेपाली हातमुख जोर्नकै लागि विदेशिनु नपरोस्, देशको स्रोत साधनको सदुपयोग होस्, समृद्धिको शिखरतर्फ अघि बढोस् भन्ने हो । तर, दशकौंदेखिको यो सपना कहिले पूरा हुने हो थाहा छैन । नेपाली जनताका सामु समृद्धि र सुख महसुस गर्ने वस्तु मात्र भएको छ । किनभने नेपालमा जति राजनीतिक क्रान्ति भए त्यसले मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धि दिन सकेन । यसको कारण सही र सक्षम नेतृत्वलाई अगाडि आउन नदिनु हो ।
सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अधिकांश उम्मेदवार पुराना थिए, जो दशकौंदेखि चुनाव लडेका, जितेका र प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकाहरु थिए । तर, धेरै त्यस्ताले चुनाव हारे । कारण थियो– केही गर्न नसके पनि उनीहरुमा अझै थकान छैन चुनाव लड्न तर, देश बनाउने हिम्मत भने पटक्कै छैन । पद लिन जति उत्सुक छन् नेताहरु देश बनाउने मामलामा उत्तिकै कमजोर छन् ।
विकासको कुरा गर्ने हो भने सरकारहरुले कति विकास ग¥यो, कति जनतालाई राहत दियो अनि देशको आर्थिक समृद्धिमा कति टेवा पु¥यायो र देशको सुदूर भविष्यसम्म सकारात्मक असर पर्ने के कति काम भयो भन्ने लेखाजोखा गर्दा सबै छर्लङ्ग हुन्छ । सरकार चलिरहन्छ, विकास निर्माणका आयोजनाहरु पम्परागत रुपमा घिस्रदै घिस्रदै चलिरहेका छन् । मेलम्चीको दुई दशकले यस्तै देखाउँछ । दक्षिण एसियामै विजुली बाल्ने अग्रणी मुलुक अनि विश्वमै जलस्रोतमा सबभन्दा धनी भएर पनि १००० मेगावाट विद्युत निकाल्न सकेका छैनौं । विकास यही हो ? कतिन्जेल अल्झाउने । अब पटकपटक अवसर पाएकाहरुले विश्राम लिएर नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मा दिने त्याग गर्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिको दुई आयाम हुन्छ । एउटा आन्दोलन वा क्रान्ति, अर्को शान्ति अर्थात् समृद्धि । नेपालमा पटकपटक आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनको नेतृत्व अहिलेका शीर्ष भनिएका नेताहरु (कति दिवंगत भैसके)बाटै भएको हो । यो गर्वलायक पक्ष हो । तर क्रान्तिको नेतृत्व गरेको, जेल बसेको, कुटाई खाएको भन्दै आजीवन मन्त्री–प्रधानमन्त्री–सांसद आफू मात्रै बनिरहनुपर्ने भन्ने मान्यताले उनीहरुको राजनीतिक चेतना र देशभक्तिको भावनामा ठेस पु¥याउँछ । क्रान्ति नायकहरुलाई जनताले पटकपटक पुरस्कृत गरेका छन् । तर, उनीहरुले जनताको त्यो पुरस्कारको सम्मान गर्न सकेनन् । एकले अर्कोलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने काम मात्रै गरिरहे । अर्थात् आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए । उनीहरुले भट्याउने देशको समृद्धिको नारा केवल नारा मात्रै बनिरहेको छ ।
राजनीतिमा पुस्तान्तरण भए मात्र देशले विकास गर्छ । यहाँ आजीवन पद ओगटिरहने प्रवृत्ति छ । २०४८ सालदेखि लगातार उच्च पदमा पुगेकाहरुलाई अझै कति पद चाहिएको ? देशको माया गर्छु भन्नेले सक्षमलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । अहिले मुलुकका तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले,र माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका नेता, जो यसअघि कैयौंपटक प्रधानमन्त्री बने, मन्त्री बने र सांसद पनि बने, उनीहरुकै निरन्तरता छ । कोही पनि नेताले देशको भावी प्रधानमन्त्री अब ‘फलानो’ भनेर जनताले आश गरेका युवा पुस्ताका नेताको नाम उच्चारण नै गरेनन् ।
यही प्रवृत्तिले गर्दा जनतामा स्थापित राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुप्रति वितृष्णा जनाएको छ र विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । यसको भेउ नेताहरुले पाएका छन् कि छैनन् त्यो उनीहरुले नै जान्ने कुरा हो । अहिलेको निर्वाचन नतिजाले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । एउटा सत्य के हो भने नेताहरुले जनताको भावनाको कदर पटक्कै गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु लोकतन्त्रको नाममा आफ्नो हालीमुहाली चलाइरहन चाहन्छन् ।
सत्ताको निकट रहने तीन दलभित्र युवा पंक्तिका आशलाग्दा थुप्रै नेताहरु छन् । ती नेताहरुले संसदमा रहँदा वा नरहँदा जहिले पनि देश र जनताको पक्षमा खटिरहेका हामी सबैले देखेकै हौं । किन ती नेताहरुलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर अघि सारिएन ? अर्को कुरा चुनाव जितेका शेरबहादुर, केपी ओली, प्रचण्डहरुले अब आफूहरु प्रधानमन्त्री नबन्ने र युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिने भनेर किन भनेनन् ? किन आफू नै प्रधानमन्त्री र आफ्ना नजिककालाई नै मन्त्री बनाउने तयारी किन गरे ?
राजनीतिक स्थिरताको नाममा आफ्नो सत्ता सुरक्षाको नौंटंकी नगर्ने हो भने देशले आशगर्नसक्ने ठाउँ भने छ । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो भने कम्तिमा पाँच वर्षसम्म सरकार परिवर्तन हुँदैन र यसले केही न केही विकासको ढोका खोल्नेछ । अब बन्ने सरकारमा पुरानालाई हैन नयाँ सोच र योजना भएका इमान्दार सांसदलाई मन्त्री बनाउने हो भने देशले पक्कै पनि काँचुली फेर्नेछ । केही न केही परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ । यसका लागि शीर्ष तहका नेताहरुले त्याग गर्न र सानोतिनो लालचमा नफस्ने दृढता भने देखाउनुपर्छ ।